Tsananguro Yekutsvoda Kwakanaka Bye: Iwo Mashanu Anokanganisa Maitiro eMakambani | Martech Zone
Wednesday, April 4, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Nezuro, ndakapedza kuverenga Starfish neSpider: Simba risingamisike reMasangano Asina Mutungamiriri. Dai ndaizozviisa pachinzvimbo, zvinogona kunge zviri zvitatu kana zvina kubva pa3. Iko kuverenga nekukurumidza uye meseji iri shure kwayo iri panguva yakakodzera uye yakakosha zvisingaite. Mukutendeseka kose, zvakadaro, zvaigona kuve zvakaburitswa sebepa jena uye zvine zvazvakaita zvakafanana. Izvo hazvina mhosva kune vanyori… ingori kuti iro bhuku ndere rekutsvaga nekusimbisa. Haisi bhuku rekuita.
Bhuku raBob Prosen, Tsananguro Dzidziso Yakanaka Bye zvakapesana chaizvo. Pandakangotora bhuku iri, ndainzwa sekunge ndatsika escalator ndikakwira chikepe che rocket. Ndiri chete kuburikidza nesumo uye panotove neruzivo rwakakosha. Heano teaser - iwo mashanu maitiro akaremara anowana makambani nemasangano hapana kwazvinokurumidza:
Kusanzwisisika kwenzira dzakajeka
Kuenzanisa kushomeka kwekuita
Kuronga panzvimbo yekuita
Kushatirwa kune njodzi uye shanduko
Ummm… huya! Bob akangopfupisa kusagadzikana kwangu kuri kukura nebasa rangu. Ini ndinoshandira yakanaka, inobudirira mushandirwi izvo kukura sekupenga. Izvo zvakanyanya vashandi uye kukwidziridzwa, zvishoma nezvishoma isu tinoita senge tinowana, zvakadaro. Bob haazive chinhu nezvekambani yedu asi akanyatsoirovera! Izvi ndivo chaizvo zvinhu izvo zviri kutinonotsa isu izvo isu zvatinofanira kuchinja nekukasira.
Ndakagovana vaviri makopi ebhuku iri kune vamwe vanhu musangano. Ndinovimba ivo vakazviita kuburikidza nesumo zvakare! Ini handigoni kumirira kuchera mune rakasara bhuku iri. Iri bhuku haritarise pane aya maitiro akaremara, rinotarisa pane izvo zvinodiwa kuti uchinje sangano uye riite kuti rifambe munzira kwayo!
Ndine chokwadi chekuti ndichave ndichigovana zvakawanda kubva mubhuku rino newe mumavhiki anotevera. Tora kopi ye Tsvoda Dzidziso Yakanaka Bye naBob Prosen kuitira kuti tikwanise kukurukura pamwe chete.
Uku ndiko Kutsemuka kweChirimo?
Apr 4, 2007 pa 3: 39 PM
Wow, Zvinonzwika sekambani yandinoshandira panguva ino. Zvinoita sekuti kambani inotanga kukura kubva kukambani diki kusvika pakati pehukuru kusvika kune imwe nzvimbo yeCorporate, Iwo maitiro mashanu anove ese kune akajairika.
Apr 4, 2007 pa 9: 47 PM
dang. raibhurari yangu yemuno handina.
Ndine 100% newe pane iyo yepamusoro 5. Ndiri kuenda kuburikidza ne "ngatiregei tisingatarise yedu yekupedzisira post mortem uye dzokorora matambudziko akafanana" pakutanga kwangu izvozvi. uh.
Apr 4, 2007 pa 10: 08 PM
Inonakidza, engtech. Isu tinotya kukanganisa kwedu kwekupedzisira zvekuti tinooma mitezo mukuronga maitiro. Mavhiki kubva pakuburitswa uye tichiri kupokana maficha uye kushanda. Hazvina hutano zvachose. Pane imwe kambani, mumwe wevakuru vebasa vandakamboti "Analysis Paralysis".
Dzimwe nguva unotofanira kuenda mberi. Sekuda kwako, kunyange zvakadaro, haugone kungofamba usina kugadzirisa!
Apr 5, 2007 pa 12: 04 AM
Ndinoshuva kuti ndaifarira kuverenga (kunze kwezvinyorwa zveblogi) handikwanise kutora uye kupedza bhuku kuchengetedza hupenyu hwangu.
Apr 5, 2007 pa 7: 52 AM
Books ndivo yangu yekusika yekuburitsa uye ivo vanonyatsopinda mukufungidzira kwangu. Ndagara ndiri muverengi anodisa – zvikuru nekuti ndagara ndichigona kushandisa zvandakadzidza pane zvandinoita.
Ehe, kusika kungangove kusiri chinhu chekutanga chinodiwa pamabasa andinoita (kunyangwe ari musimboti pazviri). Iwe, chokwadi, makadzidziswa uye makazvidzidzisa mukugadzira - saka ndinofungidzira kuti kuvhura bhuku kunogona kunge kusiri iyo yakakunakira sosi. Aya ndiwo maonero anonakidza, Bitt! Iwe une zvimwe zvekugadzira zvekugadzira?
Ini ndinoedza kugadzira 1 remabhuku mashanu kuti ave engano kuitira kuti ndisavigwa muhutungamiriri, hunyanzvi, uye zvekushambadzira. Ndanonoka pane izvozvo izvozvi!
Apr 5, 2007 pa 4: 38 AM
Pamwe unoda kugura musoro uone kuti unofa here?? Kungotamba.
Apr 5, 2007 pa 7: 45 AM
Zvakanaka! Zvishoma Starfish kuseka! Ndinotya kuti kugura musoro kunotiuraya chokwadi. Sezvineiwo, kunyangwe isu tine idzi 5 nyaya dzekutarisira, iyo Musoro ndiye wandinonyanya kutenda maari kuti ndiite shanduko dzinodiwa.
Nehurombo, ini handisi pachinzvimbo chechiremera chekuita shanduko saka zvakandiomera kuti ndiite. Ndiri kuedza kuita mutsauko, zvakadaro!